( အိပ်မက်ထဲမှာ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ( အိပ်မက်ထဲမှာ )	15
( အိပ်မက်ထဲမှာ )
Posted by တောင်ပေါ်သား on Jun 3, 2015 in Creative Writing, Poetry | 15 comments
ဘီယာ ၃ လုံး သောက်သုံးပြီးသကာလ
ည ညအခါ လ မသာသော်လည်း
( အိပ်မက်ဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်မဟုတ်သမို့ သူမက်ချင်တာ မက်တာပဲဗျို့ ) About တောင်ပေါ်သား
Alinsett @ Maung Thura says: သူ ဆိုတာ ..ဒေါ်ဖွားမေလား ဟှင်…
တောင်ပေါ်သား says: ပြောရက်ပကွယ် ၊ ကစ်ကစ်လေးဆိုတော်သေး
ဖွေးဖွေးတော့ မကြိုက်ဘူး ၊ နှင်းဆီခူးတဲ့ကောင် နမ်းပြီးသားကြီး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: မာမီဆက်နဲ့ မာမီမျိုး ယူဂျပါလားးး ဟင်င်င်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: အောင်ရဲလင်းကို ကြိုက်ပူးစ် :P
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: လာလေလိမ့်နိုး
တောင်ပေါ်သား says: အဲသလိုဖြစ်နေပြီ ကိုပေါက်ရေ
ဦးကျောက်ခဲ says: ငင့်… ဒဏ်ရာဟောင်းက အခုအထိ မကျက်သေးဘူးလား ကိုဂျီးမြိုး…
Let bygone be bygone … လေဗျာ… အားဟိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: အနာဟောင်းဆိုတာ တိုက်ဆိုင်စရာနဲ့တိုးရင် ပြန်ပြန်ထလာတယ် ကျောက်စ်ရယ်
ကျောက်စ်တို့ကတော့ အိပ်မက်တောင် မမက်နိူင်တော့ဘူး မဟုတ်လား ( ကလေးထိန်းနေရလို့ ) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1081
sorrow says: .ခက်ချေပြီ..အသစ်အသစ်တွေဖူးပွင့်စမ်းပါဗျာ..ဘယ့်နှယ့် ..အဟောင်းနားပဲ တ၀ဲလည်လည် .
တောင်ပေါ်သား says: အိပ်မက်ပါဆိုကွယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: လက်ထဲမှာတော့ ဟိုပါးကွက်မလေးလား ကိုမျိုး။ :-))
တောင်ပေါ်သား says: ဟုတ်ဘူး အရီးရေ
အောင် မိုးသူ says: ဘီယာသုံးလုံး
Mike says: .ဘီယာသုံးလုံး
.အချစ်တို့ ထစ်ချုံးဆဲပေါ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: မိုးကလည်း မမှန်သေးပါဘူး
ခုထိ ရွာတစ်ခါ ပူတစ်ချက် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.